Google Calendar နှင့်အဆက်အသွယ်များပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် Outlook for Mac ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည် ငါက Mac ပါ
ယခုသင် Outlook အတွက် Mac အတွက် Google Calendar နှင့် Contacts integration နှင့်အတူစမ်းကြည့်ပါ
လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်က Apple မှသုံးစွဲသူများအားတတ်နိုင်သမျှအခွင့်အရေးပေးမည့်အစီအစဉ်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည် စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးအီးမေးလ်မန်နေဂျာနှင့် Google ပြက္ခဒိန်များနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ Insider ပရိုဂရမ်၏ကွဲပြားခြားနားသောကွင်းများကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် Outlook ၏ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူအသုံးပြုလိုသူအားလုံးသည်၎င်းပြက္ခဒိန်ကိုဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်နှင့်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ နောက်လာမည့်ဗားရှင်းသည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရန်ကြာမြင့်စွာမသွားသင့်သောဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Microsoft ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအားဖြန့်ချိခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်အဆိုပါကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုသည် Office 365 သုံးစွဲသူများမဟုတ်သူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ကြည့်ရှုပြီးစမ်းသပ်ဖို့သင့်ရဲ့ Mac ပေါ်မှာ install လုပ်ပါသင်ရုံရန်ရှိသည် အောက်ပါ link ကိုဖြတ်သန်းသွားလာရကြ၏။ ၎င်းသည် beta ဗားရှင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်း၏အများပိုင် betas များကို developer များနှင့်အသုံးပြုသူများအသုံးပြုလေ့ရှိသော application များ၏ဤအဆင့်အဆင့်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့်ပြproblemနာအချို့ကိုပြသနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
Outlook ၏ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်နှင့်အဆက်အသွယ်များပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်၏အချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးညှိနှိုင်းပေးမည် ချက်ချင်းအဖြစ်အပျက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်စာရင်းသို့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများပြုလုပ်သည်။ Outlook ၏ beta ဗားရှင်းကိုဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်ရပ်တန့်သွားပြီး Office 30 ပရိုဂရမ်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မိမိကိုယ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက Office 365 subscription ကိုစာချုပ်ချုပ်ရမည်။
ဘယ်အီးမေးလ်မန်နေဂျာကိုသင်ပုံမှန်သုံးသလဲ။ စာပို့? Spark? ဒါမှမဟုတ် Outlook က? သင်၏နေ့စဉ်မေးလ်များကိုစီမံသောအခါသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » ယခုသင် Outlook အတွက် Mac အတွက် Google Calendar နှင့် Contacts integration နှင့်အတူစမ်းကြည့်ပါ
အိမ်ရှိကလေးငယ်များနှင့်အရောင်စာအုပ် - အီစတာကိုအသုံးပြုပါ
Apple Park Minecraft Edition ကိုကြည့်ပါ